Ukufunda okuxubile kuyindlela esizobe sihambisa ngayo ikharikhulamu yethu lapho ukufunda kwezingane kuphazanyiswa ubhadane oluqhubekayo lwe-COVID. Isikole ngasinye sinomsebenzi wokuqinisekisa ukuthi ukufunda kwezingane kuyaqhubeka futhi akuphazanyiswa. Indlela esikwenza ngayo lokhu ePorters Grange incike ekutheni kungumuntu ozihlukanisayo noma ngabe uyikilasi, iqembu lonyaka noma isikole sonke esibuyiselwa ekhaya.
Lapho Abantu Bengekho Esikoleni
Uma kwenzeka umuntu engekho esikoleni ngenxa yezimpawu ze-COVID noma ngenkathi elinde umphumela wokuhlolwa, umsebenzi uzotholakala ngeplatifomu yethu yokufunda online, iSesawaw. Lokhu kungatholakala ngokuvakashela i-www.seesaw.com bese ungena ngemvume usebenzisa imininingwane enikezwe uthisha wekilasi lengane yakho. Uma ungenayo le mininingwane, sicela uthumele i- imeyili kuleli hhovisi ku-office@pgps.porticoacademytrust.co.uk.
Uma ingane yakho ingekho esikoleni usuku olulodwa ngenkathi ilinde imiphumela yokuhlolwa, kuzoba nemisebenzi etholakalayo ngeSeesaw ezosiza ukugcina amakhono athile abalulekile njengokupelwa kwamagama kanye nama-times tables. Uma ingane yakho kufanele ihambe isikhathi eside isikole, ngokwesibonelo ngenxa yemiphumela yokuhlolwa okuhle ekhaya, kuzokwenziwa izingcezu ezintathu zomsebenzi ezizophothulwa kusukela ngosuku lwesibili lokungabikho kwazo. Kubalulekile ukuthi baqedele lo msebenzi ukuvimba ingane yakho ukuthi ingaphuthelwa yimfundo yayo. Uma bengakwazi ukufinyelela emsebenzini ngenxa yokushoda kwedivayisi noma ukuxhumana kwe-inthanethi, sicela uxhumane nesikole ekhelini le-imeyili elingenhla bese sizokuboleka i-Ipad kanye / noma i-wifi dongle.
Lo msebenzi kufanele uqedwe ekupheleni kosuku lwesikole ukuze uthisha akwazi ukubuka futhi aphendule umsebenzi ngaphambi kosuku olulandelayo.
Lapho Amaqembu Ezingane Engafundi
Uma kwenzeka ukuthi ikilasi, iqembu lonyaka noma sonke isikole sithunyelwe ekhaya, ukuhlinzekwa kuzohluka kancane. Izingane zisazofinyelela ekufundeni kwazo ngeSeesaw futhi zisazothola izifundo ezintathu ngosuku, kepha esinye salezi zifundo sizoqhutshwa 'bukhoma' ngamaqembu akwaMicrosoft. Isixhumanisi salezi zifundo sizokwabelwana ngaso nezingane ngeSeesaw. Ayikho imininingwane eyengeziwe yokungena ezodingeka.
Sicela abazali nabanakekeli ukuthi baqinisekise ukuthi izingane zabo ziyatholakala ngesikhathi esibekiwe sezifundo zabo ezibukhoma nokuthi babaxhase lapho kunesidingo ngomsebenzi wabo. Siyacela futhi ukuthi izingane zijoyine lezi zifundo zisuka egumbini lokuhlanganyela elisendlini njengekhishi noma indawo yokuphumula.
Sonke sinethemba lokuthi lezi zinyathelo zizoba zivelakancane ekusetshenzisweni kwazo, kepha iqiniso esiphila kulo ukuthi i-COVID ilapha ukuhlala ikusasa elibonakalayo. Ngakho-ke kumele sonke sikulungele ukuqinisekisa ukuthi ukufunda kwezingane akulimazi. Siyabonga ngokuseseka kwakho.